Mpanamboatra sy mpamatsy Aluminium Composite avo lenta ao China | Chenyu
Ny tontonana mitambatra alimina dia nohafohezina ho toy ny tontonana mitambatra alimo. Izy io dia karazana fitaovana vaovao izay voahodina sy ampiarahan'ny andian-dahatsoratra sy fitambarana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo takelaka aluminium voadinika sy voaravaka ho toy ny faritra, polyethylene ary polypropylene plastika ho sosona fototra.
1. Ny gloss an'ny panel acp dia avo kokoa noho ny panel acp mahazatra, izay mitondra fahatsapana fahitana mamirapiratra amin'ny olona.
2. Ny lokon'ny tontolon'ny alim-bolan'ny alim-bolo dia mena, mavo, fotsy, mainty ary loko hafa somary mamiratra.
3. Araka ny hevitry ny tsenan'ny haingon-trano tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny haingon-trano firavaka alim-bolo vita amin'ny alim-bolo avo lenta dia neken'ny tsena ary noraisin'ny tsena.
4. Ny tontonana avo lenta amin'ny alim-bolo dia azo oharina amin'ny vera vita amin'ny loko, ary tsara kokoa noho ny vera nolokoina momba ny fiatraikany, ny fahombiazan'ny fananganana ary ny fitaterana lavitra sns.
1. Seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, gara, metro, toeram-pivarotana, hotely, toerana fialamboly, trano ambony, villa, tranon'ny birao, haingon-trano amin'ny rindrina ary ravaky anatiny
2. Takelaka lehibe, fampisehoana varavarankely, fivarotam-baovao, fivarotam-boky, tranokala, mpiambina, tobin-tsolika eny amoron-dalana
1) Tsipika fananganana
Ny tsipika fananganana dia mitana ny andraikiny amin'ny fanadiovana ny menaka fanosotra mihosin-tany, ny menaka manohitra ny okididia ary ny tady isan-karazany mandritra ny fizotran'ilay sosona mifatotra amin'ny vatan'ny coil aluminium, ary manafoana ny rotsakorana silikônika, magnesium, varahina ary loto hafa amin'ny ny etona aluminium.
2) Tsipika fametahana mazava tsara
Ny coating dia mampiasa milina fametahana rojom-pandrefesana iraisam-pirenena mandroso iraisam-pirenena, izay manamboatra fonosana mazava tsara amin'ny fanjakana mihidy sy tsy misy vovoka, mba hifehezana tsara ny hatevin'ny sarimihetsika manarona sy ny kalitaon'ny fisehony; ny oven dia mizara ho faritra efatra hifehezana ny mari-pana.
3) Tsipika fitambaran'ny paty mafana mitohy
Ny fisafidianana ny fonosana polymer import, miankina amin'ny fitaovana mandroso, ny teknolojia tonga lafatra, ary ny fanaraha-maso henjana, hany ka ny diplaoma vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia manana mari-pahaizana peeling, izay nihoatra ny mari-pamantarana marika malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
(1) Amin'ny toetr'andro mahazatra, ny loko eo amin'ny tampon-trano dia tsy hikororosy, hikopaka, vaky, na vovoka.
(2) Eo ambanin'ny toe-piainana ara-tontolo iainana mahazatra, tsy hisy ny peeling na ny miboiboika ny takelaka.
(3) Rehefa tratry ny taratra na hafanana ara-dalàna ny takelaka dia tsy hisy ny fanalefahana chromatic tsy mahazatra.
(4) Diniho ny fomba fanaraha-maso mifanaraka amin'ny fitsipika iraisam-pirenena, ary ny tondro rehetra dia mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra nasionaly sy ny fenitry ny orinasa na ny fepetra takian'ny fifanarahana.
(5) Fluorocarbon rindrina ivelany rindrina novokarina mifanaraka amin'ny fenitra nasionalin'ny aluminium-plastika fitambarana tontonana GB / T17748-1999, ny firakotra dia 70% fluorocarbon résin, ampiasaina ambanin'ny mahazatra toetr'andro tontolo iainana toetr'andro, afaka manome 10-15 taona ny kalitao toky. Ho fanampin'ny toetra ara-batana sy ara-mekanika an'ny takelaka plastika vita amin'ny aliminioma, ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny aluminium dia tsy manana afo ihany koa, ary ny fahombiazan'ny fandoroana azy ireo dia mahatratra na mihoatra ny haavon'ny B1 notondroin'ny QB8624.
Teo aloha: Mpanamboatra tontolon'ny rindrina plastika haingon-trano - Panel fitambaran-tsoratry ny aluminium - Chenyu
Manaraka: Panel vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina